Gwaro idzva raburitswa nehurumende rinoti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere cheCovid 19 vanhu vanenge vasina kubaiwa nhomba dzekudzivirira chirwere.
Gwaro iri rinotiwo vana vadiki vave kunyanya kubatwawo nemhando yeDelta variant.
Gwaro raburitswa nemukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCovid 19 muhofisi yemutungamiri wenyika, Doctor Agnes Mahomva, riri kudaidzwa kuti “Covid 19 Admissions and Community Deaths by Vaccination Status,” rinoti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevanhu vari kupinzwa muchipatara vachirwara nechirwere cheCovid 19, vanhu vasina kubayiwa nhomba.
Gwaro iri rinotiwo pavanhu mazana maviri nevanomwe vakaongororwa mushure mekufa nechirwere cheCovid 19, zvikamu makumi masere nezvisere nezvidimu zvipfumbamwe kubva muzana (88.9 percent) vanhu vakange vasina kubayiwa nhomba dzeCovid 19.
Mugwaro ravo iri, Amai Mahomva vati havazivi kuti zvikamu zviviri nezvidimu zvipfumbamwe (2.9 percent) zvevanhu vavakaongorora ava vakafa vakabaiwa nhomba dzeCovid 19 here kana kuti kwete.
Studio7 haina kukwanisa kubata Doctor Mahomva kuti tinzwe zvakawanda pamusoro pegwaro ravo.
Asi zvichitevera kubuditswa kwegwaro iri, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko uye vari mutauriri Cabinet Taskforce on Covid 19, Amai Monica Mutsvangwa, vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti kubayiwa nhomba kunodzivirira ndufu dzine chekuita nedenda iri vakakurudzira veruzhinji kuti vanobayiwa.
Mugwaro ravo, Amai Mahomva vatiwo ongororo yavo yakabuditsa pachena kuti kutapuriranwa kwechirwere cheCovid 19 kuri kuita chamurambamhuru mumatunhu ose munyika.
Vaimbove gurukota rezvehutano uye vari munyori anoona nezvehutano muMDC Alliance, Doctor Henry Madzorera, vati chave kudikanwa ndechekuti hurumende itore matanho akasimba ekuona kuti vanhu vese vabaiwa nekukasika kuitira kuti vazvidzivirire kudenda iri.
Bazi rezvehutano rinoti pane vanhu makumi mapfumbamwe nemumwe chete vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid 19 pazviuru zviviri nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe chete, (2961).
Vanhu zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu, 2265, vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika yose pazviuru zvipfumbamwe nezvishanu zvine mazana matanhatu nemakumi masere nevatanhatu (95 686) uye vapora vasvika pazviuru makumi matanhatu nezviviri nemazana mapfumbabwe ane makumi masere nevatanhatu (62 986).
Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana nemazana mapfumbabwe nevashanu (1 400 905) uye vabayiwa nhomba yechipiri vave zviuru mazana matanhatu zvine makumi manomwe nechimwe nezana makumi mashanu nevashanu (671 155).
Huwandu uhwu hwunogona kukwira manheru nhasi pachaziviswa zvawanikwa muongororo yaitwa munyika yose.
Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika.